SAMOTALIS: Madaxweynaha Oo Kulan Muhiima Isugu Yeedhay Saddexda Hay’addood Ee Kala Ah Hanti Dhawrka Guud Ee Qaranka, Xeer Ilaalinta Qaranka Iyo Komishanka Maamul wanaaga
“Sida aad la socotaan, waxaan ahay Mas'uul caan ku ahaa cimrigii, maamul wanaag iyo nacaybka xatooyada xoolaha ummadda. qarankan hoggaaminayey, waxaan xooga saaray sidii loo dhisi lahaa qaran ka bad qaba cudurrada ragaadiya horumarka dalka, ee ay kow ka yihiin maamul-xumida iyo musuqmaasuqu” Madaxweynaha Qaranka Somaliland
“waxa iga go'an in aan ummaddayda uga tago dhaxal wanaagsan, isla markaana aan naftayda u reebo taariikh duug ah…. xilliyada kala guurka marka ay dawladuhu galaan, waxa dhacda in la xalaashado hantida ummadda, boob iyo dhacna uu bilaabmo” Madaxweyne Axmed Silaanyo
Hargeysa()Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Axmed Maxamed Silaanyo, wuxuu maanta oo ay bishu tahay 30 April 2017 kulan muhiimada isugu yeedhay Saddexda hay’addood ee kala ah Hanti dhawrka guud ee qaranka , Xeer Ilaalinta qaranka iyo Komishanka Maamul wanaaga.
Ugu horreyn, waxaan jecelahay in aan idinku bogaadiyo gudashada waajibaadkiina shaqo, taasoo qayb weyn ka ah hab-sami-u-socodka hawlaha qaranka. Sida aad la socotaan, waxaan ahay Mas'uul caan ku ahaa cimrigii, maamul wanaag iyo nacaybka xatooyada xoolaha ummadda. Muddadii aan qarankan hoggaaminayey, waxaan xooga saaray sidii loo dhisi lahaa qaran ka bad qaba cudurrada ragaadiya horumarka dalka, ee ay kow ka yihiin maamul-xumida iyo musuqmaasuqu.
Sidaa darteed, waxa iga go'an in aan ummaddayda uga tago dhaxal wanaagsan, isla markaana aan naftayda u reebo taariikh duug ah.